ch 1 ယောဟန်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 1 ယောဟန်သည်
1:1 အစအဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏, နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏, နှင့်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏.
1:3 ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကိုယ်တော်ကတဆင့်လုပ်ခဲ့ကြသည်, နှင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ဘာမျှကိုယ်တော်ကိုမပါဘဲဖန်ဆင်းခဲ့သည်.
1:4 ဘဝကကိုယ်တော်၌ရှိ၏, နှင့်ဘဝကယောက်ျား၏အလင်းခဲ့.
1:5 ထိုအခါအလင်းသည်မှောင်မိုက်၌ထွန်းလင်း, နှင့်မှောင်မိုက်ကိုကနားမလည်ခဲ့ဘူး.
1:6 ဘုရားသခင်ကလှေတျတျောမူသောသူတယောက်ရှိခဲ့သည်, ယောဟန်အမည်ရှိ.
1:7 သူကအလင်းအကြောင်းကိုသက်သေခံချက်ပူဇော်ဖို့သက်သေအဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့, ဒါကြောင့်အားလုံးသူ့ကိုမှတဆင့်ယုံကြည်မယ်လို့.
1:8 သူကအလင်းမဟုတ်ခဲ့, ဒါပေမယ့်သူကအလင်းအကြောင်းကိုသက်သေခံချက်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်.
1:9 စစ်မှန်တဲ့အလင်း, အရာအသီးအသီးထှနျးလငျးပေးပါ, ဤလောကသို့ကြွလာတော်ခံခဲ့ရ.
1:10 သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာခဲ့သည်, နှင့်ကမ္ဘာသူ့ကိုမှတဆင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, နှင့်ကမ္ဘာသူ့ကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး.
1:11 သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်ထံသို့ ဝင်., မိမိကသူ့ကိုလကျမခံခဲ့ပါဘူး.
1:12 သို့သျောလညျးအကြင်သူသည်လုပ်ခဲ့တယ်သူ့ကို accept, သူ၏နာမယုံကြည်သောသူတို့သည်, သူကသူတို့ကိုဘုရားသခင်၏သားတို့သည်ဖြစ်လာရန်တန်ခိုးကိုပေးတော်မူ၏.
1:13 ဤရွေ့ကားမွေးဖွားနေကြတယ်, မဟုတ်သောအသွေးကို, မဟုတ်ဇာတိပကတိ၏အလိုတော်, မဟုတ်သလိုယောက်ျား၏အလိုတော်, ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်၏.
1:14 နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလူ့ဇာတိဖြစ်လာခဲ့သည်, သူငါတို့တှငျနထေိုငျခဲ့, အကြှနျုပျတို့သညျဘုနျးတျောကိုမွငျလြှငျ, ခမည်းတော်ထံမှတစ်ဦးသာတစ်ပါးတည်းသောသားကဲ့သို့ဘုန်းအသရေ, ကျေးဇူးတော်နှင့်သမ္မာတရားကိုအပြည့်အဝ.
1:15 ယောဟန်သည်သူ့ကိုအကြောင်းကိုသက်သေခံချက်ကမ်းလှမ်း, သူအော်ဟစ်, ဟုဆို: "ဒါကငါကလည်းအဘယ်သူကို ပတ်သက်. တစ်ခုဖြစ်ပါသည်: '' သူငါ့နောက်ကြွလာရန်ဖြစ်ပါသည်, ရှေ့ဆက်ငါ့ကိုနေရာချထားပြီး, သူသည်ငါ့ရှေ့မှာတည်ရှိသောကွောငျ့။ ' "
1:16 နှင့်သူ၏တန်ဆာထဲကနေ, ငါတို့ရှိသမျှသည်ခံရကြပြီ, ပင်ကြေးဇူး.
1:17 ပညတ်တရားသည်မောရှေကိုသော်လည်းပေးသနားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတော်တရားနှင့်သစ္စာတရားကိုယေရှုခရစ်အားဖြင့် လာ. ,.
1:18 ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှသိမြင်လျှင်; တစ်ခုတည်းသောတစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို, ခမည်းတော်၏ရင်ခွင်၌အဘယ်သူသည်, သူကသူ့ကိုယ်သူသူ့ကိုဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်.
1:19 ဤရွေ့ကား, ယောဟန်၏သက်သေခံတော်မူချက်ဖြစ်ပါသည်, ယုဒလူတို့ယေရုရှလင်မြို့မှအထံတော်ယဇ်ပုရောဟိတ်နှင့်လေဝိစေလွှတ်သောအခါ, သူတို့ကသူ့ကိုမေးပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်, "မင်းဘယ်သူလဲ?"
1:20 သူကဝန်ခံကြောင်းငြင်းပယ်ခဲ့ပါဘူး; နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူဝန်ခံခဲ့သည်: "ငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဖြစ်၏။ "
1:21 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်: "ထိုအခါသင်သည်ဘာတွေလုပ်နေလဲ? သငျသညျဧလိယကို Are?"ထိုအခါသူကပြောသည်, "" ငါ။ ကိုမဖြစ်ကြောင်းကို "သင်တမန်တော်မြတ် Are?"ထိုအခါသူကဖြေကြား, "အမှတ်"
1:22 ထို့ကြောင့်, သူတို့ကသူ့ကိုအားဆို၏: "မင်းဘယ်သူလဲ, ငါတို့ကိုစလှေတျသောသူတို့အဖို့အဖြေတစ်ခုပေးစေခြင်းငှါဒါ? သင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြောဘူး?"
1:23 ဟုသူကပြောသည်, "ငါသည်သဲကန္တာရထဲမှာတစ်ဦးအသံဖြင့်အော်ဟစ်ပါ၏, '' သခင်ဘုရား၏ဖြောင့်လမ်း Make,'' ကိုယ့်ပရောဖကျအဖွစျကျဟရှောယကဆိုသည်။ "
1:25 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်နှင့်ကလညျး, "ထိုအခါသင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဗတ္တိဇံပါဘူး, သငျသညျခရစျတျောမဟုတျပါလျှင်, မဟုတျဘဲဧလိယသည်, မတမန်တော်မြတ်?"
1:26 ယောဟနျသညျကားများကသူတို့ကိုပြန်ဖြေ: "ငါသည်ရေနှင့်ဗတ္တိဇံ. သို့သော်လည်းသင်တို့အလယ်၌တဦးတည်းရပ်တည်, သင်မသိသောအဘယ်သူကို.
1:27 အတူတူငါ့နောက်ကြွလာရန်ဖြစ်ပါသည်သောသူသည်, ရှေ့ဆက်ငါ့ကိုနေရာချထားပြီးခဲ့သူ, အဘယ်သူ၏ဖိနပ်ငါလျှော့ပေးရေးဖို့မထိုက်မတန်ဖြစ်ကြောင်းကို၏ကြိုးကို။ "
1:28 ဤအမှုအရာတို့ကို Bethania အတွက်ဖြစ်ပျက်, ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ပြီး, ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်ဘယ်မှာ.
1:29 နောက်နေ့တွင်, ယောဟနျသညျယရှေုသူ့ကိုဆီသို့ငါမြင်၏, ဒါသူကပြောပါတယ်: "အကယ်, ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်. အကယ်, ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားကြာသောသူမူကား.
1:30 ဤသည်ငါကလည်းအဘယ်သူကို ပတ်သက်. တစ်ခုဖြစ်ပါသည်, '' ငါ့ကိုလူတရောက်ရှိပြီးနောက်, ရှေ့ဆက်ငါ့ကိုနေရာချထားပြီးခဲ့သူ, သူသည်ငါ့ရှေ့မှာတည်ရှိကြောင့်။ ''
1:31 ငါသည်ထိုသူကိုမသိခဲ့ပါ. သို့သျောလညျးငါသည်ရေနှင့်ဗတ္တိဇံကိုလာသောဤအကြောင်းပြချက်အဘို့ဖြစ်၏: သူသည်ဣသရေလအမျိုး၌ထင်ရှားစေခြင်းငှါဤမျှ။ "
1:32 ယောဟနျသသက်သေခံချက်ကိုကမ်းလှမ်း, ဟုဆို: "ငါသည်ဝိညာဉ်တော်သည်ချိုးငှက်ကဲ့သို့ကောင်းကင်ကနေဆငျးသညျမွငျသည်; သူသည်သူ့အပေါ်သို့ကျန်ရစ်.
1:33 ငါသည်ထိုသူကိုမသိခဲ့ပါ. သို့သော်ရေနှင့်အတူဗတ္တိဇံမှငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူဖြစ်သည်ဟုငါ့အားပြောဆို၏: '' သူကဘယ်သူကိုကျော်သင်ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဆင်းနှင့်ကျန်ရှိသောမြင်ရပါလိမ့်မည်, ဒီညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောနှင့်အတူ baptizes သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ''
1:34 ငါမြင်, ငါသက်သေခံ: ဒီတစ်ခုကဘုရားသခငျ၏သားတျောဖွစျကွောငျးကို။ "
1:35 နောက်တဖန်နက်ဖြန်နေ့၌, ယောဟန်သည်မိမိတပည့်နှစ်ယောက်တို့နှင့်အတူရပ်နေ၏.
1:36 ယရှေုသလမ်းလျှောက်၏ရှေ့တော်၌ဖမ်း, ဟုသူကပြောသည်, "အကယ်, ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်။ "
1:37 နှစ်ယောက်တပည့်စကားပြောသူ့ကိုကိုနားထောင်ခဲ့သည်. ထိုသူတို့သညျယရှေုနောက်တော်သို့လိုက်.
1:38 ထိုအခါယေရှုသည်, ပတ်ပတ်လည်လှည့်နဲ့သူ့ကိုအောက်ပါသူတို့ကိုမြင်လျှင်, ထိုသူတို့အားပြောဆို, "သင်သည်အဘယ်သို့ရှာကြသည်?"ထိုသူတို့ကလညျး, "အရှင်ဘုရား (ရာဘာသာကိုဆိုလိုသည်, အရှင်ဘုရား), သင်ဘယ်မှာနေလဲ?"
1:39 သူကထိုသူတို့အားပြောဆို, " လာ. ကြည့်ရှုပါ။ " သူတို့က သွား. သူတည်းခိုရာကိုမွငျလြှငျ, သူတို့သည်ထိုနေ့ထိုသခင်နှင့်အတူ နေ.. အခုတော့ဒသမနာရီအကြောင်းကိုခဲ့သည်.
1:40 နှင့်အနြေ္ဒ, ရှိမုန်ပေတရု၏ညီ, ယောဟနျသထံမှသူ့ကိုအကြောင်းကိုကြားသိခဲ့သောနှစ်ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်.
1:41 ပထမဦးဆုံး, သူသည်မိမိအစ်ကိုရှိမုန်ကိုတွေ့, သူကသူ့ကိုအားဆို၏, "ကျနော်တို့ကမေရှိယကိုတွေ့ကြပြီ," (ခရစျတျောအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောသော).
1:42 ထိုမင်းသည်ယေရှုအားသူ့ကိုဦးဆောင်. ထိုအခါယရှေု, သူ့ကိုငေး, ကပြောပါတယ်: "သင်ကားရှိမုနျများမှာ, ယောန၏သား. သငျသညျကဖေခေါ်တွင်စေရမည်," (ပတေရုသအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောသော).
1:43 နောက်နေ့တွင်, သူသည်ဂါလိလဲသို့သွားချင်ခဲ့တယ်, သူဖိလိပ္ပုကိုတွေ့. ထိုအယရှေုကလညျး, "ကိုယ့်နောက်လိုက်ခဲ့ပါ။"
1:44 အခုတော့ဖိလိပ္ပုသည်ဗက်ဇဲဒမြို့မှ, အန္ဒြေနှင့်ပေတရု၏မြို့.
1:45 ဖိလိပ္ပုသည်နာသနေလကိုတွေ့, သူကသူ့ကိုအားဆို၏, "ကျနော်တို့ကမောရှေသည်ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်း၌ရေးသားထားသည်ဘယ်သူကိုအကြောင်းတတွေ့ပြီ: ယရှေုသညျ, ယောသပ်၏သား, နာဇရက်မြို့သားထဲကနေ။ "
1:46 ထိုအခါနာသနလေကလညျး, "ကောင်းသောဘာမှနာဇရက်မြို့သားများမှဖြစ်နိုင်သ?"ဖိလိပ္ပုကလညျး, " လာ. ကြည့်ရှုပါ။ "
1:47 ယရှေုသညျနာသနေလသူ့ကိုမျက်နှာသို့ငါမြင်၏, သူကသူ့ကိုနှင့် ပတ်သက်. ကပြောပါတယ်, "အကယ်, အဘယ်သူမျှမလှည့်စားအမှန်တကယ်လည်းမရှိအစ်စရေးအဘယ်သူကိုအတွက်တစ်ဦး။ "
1:48 နာသနေလကလည်း, သူ့ကို, "သင်ငါ့ကိုသိကြပါဘယ်မှာမှစ?"ယေရှုတုံ့ပြန်ဟုလြှောကျလေ၏, "ဖိလိပ္ပုသည်သင်တို့ကိုခေါ်ခြင်းမပြုမီ, သင်သင်္ဘောသဖန်းပင်အောက်၌ရှိသောအခါ, မင်းကိုတွေ့တယ်။"
1:49 နာသနေလသူ့ကိုကလညျး: "အရှင်ဘုရား, သင်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုများမှာ. သငျသညျဣသရလေ၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြ၏။ "
1:50 ယရှေုသညျမှတုန့်ပြန်နှင့်ဟုပြောသည်: "ငါသင်္ဘောသဖန်းပင်အောက်၌သင့်ကိုငါမြင်၏သောသင်ကိုပြောသည်ဆိုသောကြောင့်, သင်ယုံကြည်. ဤအမှုအရာထက် သာ. ကြီးမြတ်, သင်မြင်ရလိမ့်မည်။ "
1:51 သူသညျအထံတော်ကပြောပါတယ်, "အာမင်, အာ, ငါသည်သင်တို့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်, သငျသညျကောငျးကငျဘုံ၌ဖွင့်လှစ်မြင်ရကြလိမ့်မည်, ဘုရားသခငျ၏ကောင်းကင်တမန်လူသားသည်ကျော်တက်နှင့်ဆင်း။ "